Facebook Messenger ကလေးများ - ကလေးများအတွက်စာတိုပေးပို့ရေး application Androidsis
Facebook Messenger ကလေးများ - ကလေးများ၏လျှောက်လွှာပုံစံ
ငါတို့ရှိသမျှသည်သိ Facebook က Messenger ကို။ la လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးလျှောက်လွှာ လူမှုကွန်ယက်၏။ အစပိုင်းမှာတော့လူမှုကွန်ယက်ရဲ့ chat အဖြစ်ပasိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသိသိသာသာတိုးတက်လာသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသစ်တစ်ခုလာပြီ ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည့်လျှောက်လွှာပုံစံ အိမ်၏။ ရောက်ရှိလာသည် Facebook Messenger ကလေးများ.
လြှောကျလှာ Google သို့မဟုတ် YouTube ကဲ့သို့သောအခြားသူများ၏နမူနာကိုလိုက်နာပြီးကလေးများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါ။ စိတ်ကူးကကလေးငယ်တွေအတွက်လုံခြုံတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပိုက်ကွန်တွင်တွေ့နိုင်သောအန္တရာယ်များစွာရှိသည်။
လျှောက်လွှာကိုမျှော်လင့်ရသည် ယခုအပတ် iOS ထုတ်ကုန်များတွင်ဆင်းသက်။ Android ဖုန်းကိုင်သူတွေကတော့နည်းနည်းကြာကြာစောင့်ရ ဦး မယ်။ ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းတွင်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်သော်လည်း။ သောကြောင့် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Android Messenger ကလေးများအတွက် Facebook Messenger Kids ကိုရရှိနိုင်ပါသည်.
လျှောက်လွှာကိုတစ် ဦး အဖြစ်ကြေငြာသည် ကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု အကြောင်းပြချက်များစွာအတွက်။ ပထမတစ်ခုကသင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုအကောင့်နှင့်ဆက်စပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သမျှအဘို့ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပဲအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုစမတ်ဖုန်းများတွင်သာမကဘဲ Facebook Messenger Kids ကိုတက်ဘလက်တစ်ခုတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, လုံခြုံမှုသည်အဓိကကျသည် ဒီ app ထဲမှာ ဖြစ်လိမ့်မည် သူတို့၏ကလေးများအတွက်စာရင်းဖွင့်မည့်မိဘများကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည် သင်၏ Facebook အကောင့်မှ။ ထို့အပြင်မိဘများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကလေးများပြောဆိုသည့်အဆက်အသွယ်များကိုလည်းအတည်ပြုပေးလိမ့်မည်။ ပါတီနှစ်ခုလုံးလည်းပါ ၀ င်လိမ့်မည် အဆက်အသွယ်တစ်ခုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်း။ တစ်စုံတစ် ဦး ကိုပိတ်ဆို့သောကလေးသည်မိဘမှအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဖခင်ဖြစ်သူကလုပ်ရင် သားသည်ဤအဆက်အသွယ်ကိုသော့ဖွင့ ်၍ မရပါ.
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် Messenger ကလေးများသည်မိဘ၏ကြီးကြပ်မှုကိုခံယူရမည့်အန္တရာယ်ကင်းသော application တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကတိပေးသည် အချိန်တိုင်း။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကလေးအားလျှောက်လွှာကိုဘေးကင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုရန်ကူညီသည်။ ၎င်း၏လွှတ်တင်မှုကိုလကုန်တွင်မျှော်လင့်ရသည်။ ဒီလျှောက်လွှာကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Facebook Messenger ကလေးများ - ကလေးများ၏လျှောက်လွှာပုံစံ
အခြား Android ဆိပ်ကမ်းများ၏အမှတ်တံဆိပ်များ၏ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်း ၃ ပြခန်း။